Motadata: Xalka ITOps Midaysan
DFITTM BARNAAMIJKA URURKA
Qaab-dhismeedka lahaanshaha ee ku jira AI iyo ML hawlgallada IT si loo kordhiyo hufnaanta loona yareeyo kharashka hawlgallada.
Daawashada ShabakaddaLa socodka wakhtiga-dhabta ah iyo qalabka isku xidhka ee ay wado AI ee lagu falanqeynayo shabakada ururka oo dhan.
Kormeerka KaabayaashaXalka indha-indhaynta dhexe ee horumarsan si kaabayaasha IT-ga looga dhigo mid casri ah.
Log AnalyticsFalanqee xogta mashiinka si aad u hesho isbeddellada iyo qaababka si aad u hesho aragti
Automation NetworkDhis Runbooks si aad wakhtiga iyo dadaalka u badbaadiso.
Miiska AdeeggaHagaajin bixinta adeegga IT-ga iyadoo la adeegsanayo otomaatiga ku shaqeeya AI
Maamulaha hantidaWeligaa ha lumin macluumaadkaaga IT-ga iyo agabka aan IT-ga ahayn
Maareeyaha balastarSi otomaatig ah u maamula balastar oo ka ilaali meelahaaga dhamaadka dayacanka
Dar-dargeli adeeg bixintaada oo habayso hababka gudaha si aad ula kulanto kor u kaca filashooyinka isticmaalayaashaada dhamaadka.
Korjoogteynta IT-ga isku-dhafka ah
Akhrinta sifada leh
4 Faa'iidooyinka Isku -darka Miiska Adeegga iyo Nidaamka Maareynta Dhamaadka
BlogsBaro waxa ku cusub bogga ITOps
eBookAkhri qoraaladeenii u dambeeyay.
Press ReleaseHel wararkii ugu dambeeyay ee shirkadda
Qoraallada alaabtaSoo deji buug-yarahayagii ugu dambeeyay si aad si fiican ugu ogaato alaabtayada.
Sheekooyinka GuushaAkhri sida macaamiisheena uga faa'iideysteen xalalkayaga.
NewsWararkayagii ugu dambeeyay
Noqo Partner a
Codso Gelitaanka Xariirka
Abaal marin iyo Aqoonsi
Dhacdo Kasta Ayaa Tirinaysa -
Iska yaree wakhtiga dhimista digniinta-waqtiga-dhabta ah, Dashboards, iyo Falanqaynta Awood-barashada-Mashiinka ee Dhammaan Saddexda Nooc ee Telemetry - Logs, Metrics, iyo Raadraaca
Isku day Motadata
La soco oo maamul Dhamaan IT-ga
Iyada oo ay sii kordhayso isku-dhafan ee shabakadaha kala duwan ee maanta, waxa ay noqotay lama huraan u ah hay'aduhu inay maal-gashadaan qaab-dhismeedka IT-ga ee adag
Hel aragtiyo awood leh si aad u wado natiijooyinka ganacsiga
La socodka wakhtiga-dhabta ah iyo qalabka isku xidhka ee ay wado AI ee lagu falanqaynayo shabakada ururka oo dhan
Madal daawashada dhexe ee kaabayaasha IT-ga ee hor-, daruuraha iyo isku-dhafka ah
Falanqee xogta mashiinka si aad u hesho isbeddellada iyo qaababka si aad u hesho fikrado ganacsi oo la fulin karo
Dhis Runbooks si aad si joogto ah u kordhiso waxtarka shabakada oo ay la socoto hab-dhaqanka shabakada
Hagaajinta Hannaanka Ganacsiga ee Guud ahaan Ururka
Hagaajin bixinta adeegga IT-ga iyada oo loo marayo wakiilka farsamada si loo horumariyo korsashada miiska adeegga
Weligaa ha lumin raadraaca IT-ga iyo hantida aan IT-ga ahayn oo ka maamul meel keliya
Si otomaatig ah u maamula balastar oo ka ilaali meelahaaga dhamaadka dayacanka
Iska yaree MTTR adiga oo ka faa'iidaysanaya NLP-kuwadkoodu yahay Wakiil La Cabirin karo oo Sarreeya
Si otomaatig ah u samee oo ku kordhi Is-dhexgalka Dhaladka
Iyadoo in ka badan 200+ isku-dhafka wadaniga ah ee borotokoolka la socodka, daruuraha, iyo API-yada qolo saddexaad, si degdeg ah u otomaatig ah ururinta iyo hagaajinta. Isticmaal metrik iyo log apps si aad isla markaaba wax walba ugala socoto Isha kasta - Metrics, Network Flow and Logs
Xali kaaga ugu Adag
Caqabadaha Hawlaha IT
Si hufan u maamul mugga xogta sii kordheysa. Burbur xogta silos, samee macnaha dhacdooyinka wakhtiga dhabta ah, oo dar dar geliso adeeg bixinta casriga ah.
Ka saar buuqa, hel aragtiyo
Hel aragti qoto dheer adoo ka soo saaraya xog macno leh qaylada adoo habaynaya dhacdooyinka ay ku jiraan, cabbirada, xogta ku-tiirsanaanta, xogta log, iwm.
La kulan SLAs
Hubi helitaanka codsiyada iyo adeegyada muhiimka ah si ay ula kulmaan SLA adoo si firfircoon u xallinaya arrimaha iyo ka faa'iidaysiga otomatiga.
Cabbir aan Xad lahayn
Qiyaas hawlahaaga la socodka, taageerada balaayiin mitir, oo ay la socoto codsiyadaada iyo taageeridda hawlaha IT.
Lagu kalsoon yahay oo la majeerto by Shirkadaha Hormoodka ah ee Adduunka
Hel tijaabo bilaash ah 30 maalmood oo ah xalalkayaga
Bilow safarkaaga bilaa dhibka ah si aad u maamusho kaabayaasha ITga
Bilow tijaabo bilaash ah
La socodka Xogta
Bilow in aad ku maamusho kaabayaasha IT-ga hal madal oo midaysan.
BILAw tijaabada bilaashka ah
NUM 2022 Nidaamyada Mindarray Pvt. Ltd., All rights reserved.
Ku lifaaq resume/CV